ဖွတ်ကော၊ ဒေါင်းကော ဖွတ်ဒေါင်းဖြစ်သော နိုင်ငံ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဦးသိန်စိန်အစိုးရ ရိုဟင်ဂျာကို မျိုးဖြုတ်ဖို့ လုပ်လိုက်တဲ့သွေးကြွေး ကတော့ Crimes Against Humanity တွေ Genocide ပြစ်မှုတွေနဲ့ ICC မှာ ပထမဦးဆုံး ပေးဆပ်ရ တော့မယ်
ငါတို့မိဘတွေက ဝါးခြမ်းကို ဝါးလုံးဆိုရင် နင်တို့သားသမီးတွေက လုံးလိုက်တဲ့ my dear Pa Pa said that he would never argue back his parents even if they told him that the white paper is black »
ဖွတ်ကော၊ ဒေါင်းကော ဖွတ်ဒေါင်းဖြစ်သော နိုင်ငံ
U Aung Tin: ဖွတ်ကော၊ ဒေါင်းကော ဖွတ်ဒေါင်းဖြစ်သော နိုင်ငံ
ဒေါ်စုရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေ ချိုးဖောက်ခံရတုန်းက ကမ္ဘာကြီးက ဒေါ်စုဘက်မှာ ရပ်ခဲ့တယ်။
အခု အခြားလူသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ချိုးဖောက်ခံရတော့ ဒေါ်စုဘက်က အစားပေးတုန့်ပြန် စာနာပေးမယ်လို့ ကျနော်တုို့ မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ မျှော်လင့်သလုို မဖြစ်လာခဲ့တာက ကုိုယ်ကျင့်တရားအရ စဉ်းစားမရနိုင်အောင် ဖြစ်ရတယ်။
၂၀၁၂ခု ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရုိုဟင်ဂျာတွေကို လူမျိုးတုန်းအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့မှု ခိုင်လုံတဲ့ သက်သေအထောက်အထားတွေနဲ့ ကျနော်တုို့ Human Rihgts Watch က မြန်မာပြည်ထဲ သွားရောက်ပြီး တွေ့ဆုံတင်ပြဖုို့ ကြုိုးစားတဲ့အခါမှာ ဒေါ်စုကော၊ NLDပါတီက ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေကပါ ကျနော်တုို့ကုို မတွေ့ဆုံဘဲ ငြင်းပယ်ခဲ့ကြတယ်။
မြန်မာအစုိုးရလည်း ဒေါ်စုနဲ့ တစ်သဘောတည်းဖြစ်ပြီး ကျနော်တုို့ကုို တွေ့ဆုံခွင့် မပေးခဲ့ကြဘူး။
Phil Robertson, deputy director for Asia at Human Rights Watch
ရိုဟင်ဂျာတွေကို စခန်းသွင်းထားပုံကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သူ မြန်မာပြည်ကို လူ့အခွင့်အရေးဆုိုင်ရာ အကူအညီပေးနေတဲ့ ဂျူးသူဌေးကြီး George Sorosက ရုိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ စခန်းထဲမှာ ခံစားနေရတဲ့ဘဝကိုမြင်ရတာ သူကုိုယ်တုိုင် ငယ်စဉ်က နာဇီဂျာမဏီတွေရဲ့ စခန်းသွင်းနှိပ်စက်တာကုို ခံခဲ့ရတာနဲ့ အတူတူဘဲဆုိုတာကုို ပြန်သတိရမိပါတယ်တဲ့။ (မြန်မာတွေအတွက် ဂုဏ်တက်စရာပါ။)
Muang Zarni, Burmese scholar and human rights activist
မြန်မာပြည်မှာ ရုိုဟင်ဂျာနဲ့ မွတ်စလင်တွေအပေါ် မကြာခင် ထပ်မံတိုက်ခိုက်မှုတွေ တုိုးပွါးလာအုံးမယ်လို့ ကျနော်ယုံကြည်တယ်။
ဒါကြောင့် လာမည့်ရက်သတ္တပတ်တွေမှာဖြစ်ဖြစ်၊ လာမည့်လတွေ အတွင်းမှာဖြစ်ဖြစ် လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေး (ရုိုဟင်ဂျာတွေ ထွက်ပြေးမှု မဖြစ်ပေါ်ရေး)အတွက် မလုိုက်နာ မနေရ အာဆီယံဥပဒေတစ်ခုကုို မဖြစ်မနေ ပြဌာန်းရတော့မယ်။
အနည်းဆုံးအားဖြင့် ရခုိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ မတန်တဆ ခံစားနေရတဲ့ ရုိုဟင်ဂျာတွေကို ဒုက္ခသည်စခန်းထဲအထိ သွားရောက်ပြီး အကာအကွယ်ပေးမဲ့ အာဆီယံတပ်ကုို ဖွဲ့စည်း စေလွှတ်ဖို့ လိုနေပြီ။
ရုိုဟင်ဂျာတွေဟာ အင်မတန်အဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ လူမျိုးတွေဖြစ်လုို့ သူတုို့ကုို အခုဘဲ အမြန်ဆုံး အကာအကွယ်ပေးဖုို့ လုိုနေပြီ။ နောက်ငါးနှစ်မှ အကာအကွယ်ပေးမယ်လုပ်လို့ မရတော့ဘူး။
Charles Santiago, member of parliament in Malaysia and chair of the ASEAN parliamentarian for Human Rights
မေ ၁၃၊ ၂၀၁၅ Al Jazeera
Is the plight of Rohingya refugees being ignored?
Hundreds of refugees have been rescued off the coast of Indonesia and Malaysia as they were fleeing persecution.
This minority group has been denied citizenship in Myanmar, where they were subject toaheavy crackdown. Many of them have been killed and thousands were forced to leave the country.
The refugees were rescued off the coast of Malaysia and Indonesia after captains and smugglers abandoned the ships, leaving passengers to their fate
But who is really behind the Rohingya’s sufferings?
Phil Robertson, deputy director for Asia at Human Rights Watch.
Muang Zarni, Burmese scholar and human rights activist.
Charles Santiago, member of parliament in Malaysia and chair of the ASEAN parliamentarian for Human Rights.
This entry was posted on May 14, 2015 at 11:50 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.